राजधानीका मसाजमा विदेशी महिला वेश्या, रेट प्रतिव्यक्ति ६ हजार ! - Gokarna News from Nepal
राजधानीका मसाजमा विदेशी महिला वेश्या, रेट प्रतिव्यक्ति ६ हजार !
एजेन्सी– पछिल्लो समय फस्टाउदो यौन व्यापारमा विदेशी महिलासमेत संलग्न भएको पाइएको छ ।
सोमबार प्रहरीले रेड एरियामा छापा हान्दा लुकिछिपी हुँदै आएको यौन व्यापारमा विदेशी महिला संलग्न भएको पाइएको हो । राजस्थानको राजधानी जयपुरमा वेश्यावृत्ति गर्दै गरेका १० विदेशी महिलासहित १८ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।
प्रहरीले सहरका अलग अलग स्थानमा छापा हानेर उनीहरुलाई नियन्त्रणमा लिएको हो । प्रहरी अनुसन्धानका अनुसार विदेशी महिलाहरुले र स्थानीय ८ जनासँग मिलेर सहरका विभिन्न स्थानमा वेश्यावृत्ति धन्धा गरिरहेका थिए । सबै अभियुक्तविरुद्ध सहरको सदर थानमा मुद्दा दर्ता गरिएको छ ।
प्रहरीले छिमेकी घरमा यौन धन्दा हुँदै गरेको स्थानीयको उजुरीलाई सूचना बनाएर छापा हान्दा थाईल्याण्डका १० महिला र ८ स्थानीय पुरुषलाई पक्राउ गरेको हो ।
पक्राउ पर्नेमा म्यानेजर समेत छन् । उनीहरुले मसाज सेन्टरका नाममा यौन धन्दा गर्दै आएको पाइएको प्रहरीले जनाएको छ । मसाजपछि ग्राहकले शारीरिक सम्पर्क राख्न खोजे ३ देखि ६ हजार रुपैयाँमा तयार हुन्थे । प्रहरीले अभियुक्त थाइल्याण्डका महिलाको पासपोर्ट र भिजाको जफत गरेर घटनाको थप अनुसन्धानमा जुटेको छ ।